Gummaadkii Gebilay iyo Tog-wajaale - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Gummaadkii Gebilay iyo Tog-wajaale
Taxanaha Soomaali waa walaalo, Q. 6aad
Bishii March ee sannadkii 1988-kii ayaa 25 qof oo laga soo afduubtay Gabiley iyo Tog-Wajaale ay Maxkamaddii Wareegaysay ee Ciidanku ku xukuntay xabsi abadi ah. Dadkaasi idilkoodba waxay ahaayeen dad rayid ah, waxa se la saaray Maxkamad Ciidan.
Isla maalintii ayaa xukunkii loo beddalay dil toogasho ah, isla maalintii ayaana toogashadii la fuliyay. (HRW, a government at war with its own people, bogga 66aad).
Bogga 67aad, warbixintu waxay ku sheegtay in nin gaadhi watay ay ciidanku Afweyne gaadhigiisii ku joojiyeen meel ku dhaw Xabsiga Weyn ee Hargeysa, ka dibna ay ku amreen inuu ku wareejiyo furaha gaadhiga. Ninkaasi wuu diiday inuu furaha wareejiyo, isla halkii ayayna ku toogteen.
Isla boggaas, warbixintu waxay sheegtay in nin la odhan jiray Aw Axmed Daa’uud Yuusuf ay ciidankii Afweyne ka qaadeen lacag gaadhaysay 2,000 oo shilling, kolkii uu ciidankii kula gorgortamay lacagtiisana ay isla bartii ku toogteen.
Waxay ahaayeen budhcad shaadh dawladeed u soo xidhatay si ay wax ugu dhacdo, ugu boobto oo ay ugu bililiqaysato.
AKHRI: Gummaadkii Kalshiikh
Nafta basharka ee qaaliga ah, waxay gaadhsiiyeen heer uu qiimaheegu hoos maro furayaasha gaadhiga. La yaab ma noqonayso haddii aad maqasho in qof bani-aadan ah ay ku dileen midh xanjo ah.
In loogu aargudo weerraro guuldarraystay oo ay ciidankii Afweyne ku qaadeen SNM ayaa ahayd sababta loo gummaaday 25kaas qof (Ibid).
Kolka loo eego indhaha dawladda, wax farqi ah uma dhaxayn qofka Isaaqa ah ee dawladda taageersan iyo ka la dagaallmaya. Qof kasta oo Isaaq ahi waxaa loo dilayay aanada SNM, askari kasta oo ay SNM dishana waxaa loogu aarayay qof shacab ah oo magaalooyinka iska jooga.
25-kaas qof waxa ku jiray aabbe iyo labadiisii ciyaal ahaa, waxaana lagu toogtay tuulada Gaas-dheere. Akhriso magacyadoodii:
1. Sh. Ciise Yuusuf Good
2. Maxamed Cabdi Xawsi “Jawaan”
3. Maxamed Cabdi Koofil
4. Dagaal Dhinbiil
5. Muxumed Sahal
6. Kalinle Cashuur Raage
7. Muxumed Gurey Mixille
8. Xuseen Amiir Faarax
9. Mawliid Xuseen Amiir (Ninka sare inankiisii)
10. Cali Xuseen Amiir (Ka sare walaalkii)
11. Haybe Gurey Xasan
12. Siyaad Isaaq Xaaji
13. Aadan Cali Ibraahin
14. Cabdillaahi Jaamac Caqli
15. Xaaji Xasan Abraar
16. Barre Muxumed
17. Saleebaan Diiriye Xirsi
18. Maxamed Cali Samatar
19. Siciid Xasan Deeqsi
20. Ardaale Warsame Faarax
21. Aw Cali Sahal Taani
22. Cabdi Sahal Tani, (ka sare walaalkii)
23. Cabdi Maxamed Sahal (Ka sare ayaa adeer u ah)
24. Shamah Elmi Fahie
25. Daa’uud Qawrax
Human Rights Watch, a government at war with its own people, bogga 66 – 67aad, iyo lifaaqa 5aad.